Mhizha nemaCD: iwo akanakisa matipi uye mazano | Green Renewables
Iyo Compact Disc kana CD chimwe chinhu chatakashandisa mukati memakore gumi a2000 na2010, asi kushandiswa kwayo kwechitunha kuri kuderedzwa zvakanyanya. Yepamberi tekinoroji pakumhanya nekukurumidza uye neiyi fambiro mberi, une chokwadi chekuzviwana uri pamba uine yakawanda isina basa maCD. Unogona kuitwa zvimwe mhizha nemaCD zvishandiswazve kuti zvipe chechipiri hupenyu hunobatsira uye kwete kugadzira yakawanda marara. Zvirokwazvo huwandu hwazvo hwekudaidzira hunoshandiswa uye hauna chero kwaunoberekesa.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe dzakanakisa hunyanzvi nemaCD ekuti uzvishandise zvakare.
1 Mhizha nemaCD
1.2 Kurota Catcher
Izvo ndezve kugadzira hovercraft kuitira kuti vana vako vagone kuzvivaraidza uye kunakidzwa nekutamba navo. Inogona kuvhurwa kuti uone ndiani anoenda zvakanyanya kana kungonakidzwa nayo. Ngatione kuti ndezvipi zvinhu zvakakosha zvaunoda kuti ugone kuzviita:
White bepa kana kadistock
Glue stick uye pakarepo glue
Tevere, tinoratidzira matanho anodiwa aunofanira kutora kuti ugadzire hunyanzvi uru nemaCD:
Chokutanga, shandisa CD rako kudhirowa zvinyorwa zvavo pamakadhibhodhi akapfava uye vacheke.
Shandisa makara emavara kushongedza kadhibhodhi kune zvaunofarira.
Paunenge wagadzirira, namatidza kadhi paCD. Izvo zvakakosha kuti usakanganwe zvakare kubaya iyo yepakati denderedzwa kuitira kuti gomba rirambe riripo.
Uchishandisa pakarepo glue, namatidza chivharo chepurasitiki kunzvimbo yepakati peCD, ipo chaipo pane buri.
Kufufutira uye kusunga chibharumu. Wobva watora kuvhura muhomwe uye wave kugona kuenda.
Varoti vanorota vanogona kushanda sedumwa rekudzivirira vana kubva kuhusiku. Kunyangwe ivo vasina chaizvo mhedzisiro, madiki anogona kuitwa kuti atende kuti anobatsira kuitira kuti vanzwe kudzikama uye vanogona kurara zvakanaka. Kuti uite basa iri unoda zvinhu zvinotevera:
Permanent mavara mavara
Kuti uite mubati wehope iwe unofanirwa kuenda nhanho nhanho kana iwe uchida kuzviita nemazvo. Aya ndiwo matanho akakosha ekutevera.
Nhanho yekutanga ndeyekucheka chidimbu cheshinda (ingangoita gumi nemashanu cm) uye unamatira kumucheto kumusana kweCD.
Zvadaro, uchafanirwa kupfuura nepakati pegomba kune imwe mugumo we diski iyo isinganzwisisike nhamba yenguva. Kana zviri nyore kwauri, unogona kuzvibatsira nesero repurasitiki.
Kana yagadzirira, govera tambo dzese dzinogadzira shaft zvakanyanya kana zvishoma zvakaenzana. Zvino, iwe unogona kusunungura chikamu cheshinda yaive yakaiswa kumusoro uye ndokuisungira kumagumo akasara.
Inguva yekuruka mvere. Unogona kusarudza akati wandei mavara woasanganisa zvishoma nezvishoma. Gadzirira shinda iri muvara yesarudzo yako kuti utange pane tsono, sunga magumo kuseri kwe cd kune shaft uye utange kuruka. Pfungwa ndeyekuti tsono inopfuura nepahosi imwe pazasi uye inotevera pamusoro kusvikira tambo yapera.
Dzokorora kumwechete kushanda kune mamwe ese akasara mavara.
Tevere, sarudza iyo tambo yeiyo tambo yekumagumo ayo mabheji anotakura uye akarembera kubva kuCD. Sunga tambo yega yega kuseri kwayo. Kune rimwe divi, isa mabheji uye sunga banga gobvu kuti arege kudonha.
Pamusoro, inorembera shinda yakapetwa, iwe unofanirwa kupfuura nepakati pemasherufu, uye wosunga magumo acho.
Sekugunzva kwekupedzisira, unogona kushongedza pamusoro peiyo CD nemavara anocherekedza mamaki.
Yakadzokororwazve yekumonera kumusoro haingori yekutamba chete kuti vana vazvinakidze, asi zvakare inoshanda kuunza imwe nhoroondo kune nezvevabereki vechidiki. Uye ndezvekuti chete makumi mashoma emakore apfuura iyo yekutenderera yepamusoro yaive imwe yemitambo inozivikanwa uye inozivikanwa kune vechidiki. Kuti usapotsa nzira dzekare dzatingaite idzi hunyanzvi nemaCD uye tinakirwe nadzo. Kuti ugadzire pamusoro, zvinhu zvinotevera zvinodiwa:
Chena chinamirwa mapepa
Kuti uite kumusoro kwekutenderera, isu tichaona matanho anotevera:
Pepa chena inozvinamatira (kana iwe usina, unogona kushandisa chena kadhi kuti unamatire paCD), tora runyorwa rweCD, kusanganisira gomba repakati, richeke, uye unamatire paCD .
Shongedza iyo CD ine mavara mavara uye mapatani aunoda.
Pazasi peCD, pakati pegomba, iwe unofanirwa kunama machena neapapo glue.
Zvakare pakati, asi kumusoro kwepamusoro, iwe unozodzokorora kumwechete kuvhiya kunama chivharo chepurasitiki.
Kana iyo glue yaoma uye iwe ukaongorora kuti zvese zvakanamatira zvakanaka, inguva yekumisikidza yako yepamusoro uye kutanga kutenderera.
Imwe nzira yekuita kuti vana vafare pavanenge vachidzidza kugadzira pasi reSaturn kubva paCD rekare. Izvo zvinogona kwete chete hunyanzvi hwekudzokorora, asi zvakare inobatsira kugona kwevana uye kushongedza kwemukamuri yavo. Nenyika ino yakagadzirwa nezvinhu zvakadzokororwa iwe unogona kuve nekushongedzwa kwakasarudzika uye nevavariro dzakanaka maererano nenharaunda. Kuti uite basa iri unoda zvinhu zvinotevera:
Penda uye bhurasho
Tevere, tinokuratidza kuti ndeapi matanho akakosha ekutevera kuitira kuti ugadzire pasi rakashandiswazve Saturn:
Govanisa polyexpan bhora kuita mahafu maviri uye penda hafu yega yega neorenji tempera.
Mushure mokunge pende yaoma, Sunga tambo kune imwe yezvimedu kuti urembedze gare gare.
Pakupedzisira, namatidza hafu yega yega ye polystyrene bullet kuCD (imwe kumusoro uye imwe pasi se "sangweji").
Nemazano aya unogona kunakidzwa pamwe nevana vako hunyanzvi hwakareruka iwe uchizogamuchira zvigadzirwa zvekare. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve zvimwe zvehunyanzvi nemaCD.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » CD yekugadzira